Isantya seSiza esiChaphazela njani amaRhafu okuGuqulwa kwee-Ecommerce | Martech Zone
Isantya seSiza esiba nefuthe njani kwiRhafu yokuGuqulwa kwee-eCommerce
NgoLwesithathu, Agasti 5, 2020 NgoLwesithathu, Agasti 5, 2020 Douglas Karr
Simanyanisile inkqubo yemivuzo kwaye saqulunqa ukuthengisa okuzenzekelayo okwenziwe ngokobuqu kunye nobunkunkqele kumthengi we-e-commerce eyonyuse kakhulu ingeniso yabo.
Njengoko siqhubekile nokubukela abasebenzisi bephuma kwii-imeyile ngokuguqula, sichonge imiba eliqela ngokusingathwa kwabo kunye neqonga elinempembelelo enkulu isantya sendawo -Ukucaphukisa abathengi abanokubakho kunye nokuqhuba kwenqanaba lokushiya phezulu-ngakumbi kwi mobile Zixhobo.
Kulungile ukusebenza ekufumaneni ukuthengisa, ukugcinwa, ukukhuphuka, kunye nokunyuka kwexabiso loku-odola ngokuzenzekelayo kwi-e-commerce… kodwa ngaphandle kokuba isantya sendawo yakho kunye namava okuthenga angabalulekanga, awuyenzi nkulu buyela kutyalo mali. Kananjalo indawo yakho ye-e-commerce kufuneka ivavanywe ngeendlela ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukuba isantya sihlala silungile:
Ngaba indawo yakho ye-e-commerce ihlala ikhawuleza kuzo zonke izikhangeli?
Ngaba indawo yakho ye-e-commerce ihlala ikhawuleza kuzo zonke izixhobo eziphathwayo?
Ngaba indawo yakho ye-e-commerce ihlala ikhawuleza kuzo zonke izixhobo zedesktop?
Ngaba indawo yakho ye-e-commerce ihlala ikhawuleza kuyo yonke imimandla oyisebenzayo?
Ngaba indawo yakho ye-e-commerce ihlala ikhawuleza xa uneendwendwe ezininzi kwindawo yakho?
Ukwahlula ukusebenza kwesantya sendawo yakho kunye nokulinganisa amaxabiso okuguqula kuwo onke la macandelo kubalulekile kwaye kunokubonisa imiba ethile eya kuthi ichaphazele amaqondo okuguqula.
Ukuhlawula amaxabiso ngeSantya sePhepha
Akukho mbuzo malunga nefuthe elipheleleyo lesantya sephepha xa kufikwa kumanqanaba okushiya:
Isantya seSayithi ye-E-yorhwebo
Abathengi abasenalo uvalo xa bethenga kwizixhobo eziphathwayo njengoko babekade bekwenza. Imfonomfono ye-e-commerce ilula kakhulu… ukuba undwendwe lwakho lubukele esinye iscreen okanye kuncoko kunye nokuthenga kwizixhobo eziphathwayo, isantya sakho, kunye nendlela yokuguqula kufuneka zisebenze nzima, kungenjalo ziya kugxuma zizonke okanye ziyilahle inqwelo ' Ndiqalile. Jonga umahluko omkhulu wokuziphatha phakathi kwezixhobo:
A undwendwe mobile ingaphezulu kokuphindwe kabini kunokubakho ukutsiba kwindawo ngaphandle kwe undwendwe lwe desktop.
Ngaba loo nto iguqulela njani kwindlela yokuziphatha yokuthenga e-commerce? Kukhulu:
Ukuphuculwa kwe-100-millisecond kunyusa ukuthengisa izinga lokuguqulwa 8.4%
Ukuphuculwa kwe-100-millisecond kunyusa ukuthengisa Ixabiso le-odolo eliqhelekileyo (AOV) nge-8.4%
Ukuphuculwa kwe-100-millisecond kwandisa uphawu lobunewunewu ukujonga iphepha 8.4%
Ngapha koko, nazi izifundo ezi-4 zempembelelo yesantya sekhasi le-e-yorhwebo:
IAmazon ingaphulukana ne- $ 1.6 yezigidigidi ngonyaka ukuba isantya sesiza sicothiswe ngumzuzu omnye.
Izitali zabona ukwanda nge-10% kwinqanaba lokuguqula xa lanciphisa ixesha eliphakathi lokulayisha iphepha lasekhaya nge-1 yesibini.
I-Walmart ibone ukonyuka kwe-2% kumanqanaba okuguqula kuwo onke ama-1 okuphuculwa kwesibini kumaxesha okulayisha iphepha.
I-AliExpress inciphise ixesha lokulayisha iphepha ngama-36% kwaye yabona ukwanda kwe-10.5% yee-odolo kunye ne-27% yokunyuka kokuguqulwa kwabathengi abatsha.
I-Aldo ifumanise ukuba abasebenzisi abahamba ngokukhawuleza abanamava okukhawulezisa ukuzisa ingeniso ye-75% ngaphezulu komndilili kunye ne-327% ngaphezulu kwengeniso kunaleyo ifumana amaxesha okunikezela kancinci.
Sibaluleke kangakanani isantya seWebhu kwi-E-Commerce?
I-88% yeendwendwe zikhetha abathengisi abakwi-Intanethi abazisa amava okuphumelela kwiwebhusayithi.
I-18 yezigidigidi zeedola ilahleka rhoqo ngonyaka ngenxa yeenqwelo zokuthenga ezishiyiweyo.
Abathengi bakhumbula amaxesha okulayisha kwi-Intanethi njenge-35% ngaphezulu kunoko anjalo.
Sibhale ngokubanzi kwifayile ye- izinto ezichaphazela ukulayishwa kwephepha amaxesha kwaye ndingakukhuthaza ukuba usebenze ngesantya sephepha phambi kokuba uqala ukuzisa abantu kwindawo yakho.
Ezi nkcukacha-manani kunye nemizobo yanikezelwa
Isikhokelo esisandula ukwenziwa seNgcali yeWebhusayithi Izibalo zeXesha leMithwalo yeWebhusayithi- Kutheni iMicimbi yeSantya kwi2020. Sisebenzisa amanani aneenkcukacha, ii-asethi eziyiliweyo, kunye nezifundo zobuchwephesha, isikhokelo siqaqambisa isidingo esibalulekileyo sokulayisha ngokukhawuleza iwebhusayithi ukugcina abathengi be-intanethi banelisekile kwaye benyanisekile kwiivenkile ze-e-commerce ezifanelekileyo.
Funda ukuba kutheni iMicimbi yeSantya kwi-2020
tags: AldoAmazonIxabiso le-odolo eliqhelekileyobounce amaxabiso ngomzuzwanaizinga lokuguqulwaamazinga okuguqulwa kwedesktopisantya sorhweboukuthengiswa kweecommerceukujonga iphephaamaphepha kutyelelo ngalunyeizicwangciso
Sebenzisa uVavanyo oluzenzekelayo ukuphucula amava eSalesforce
I-PandaDoc: Yenza, Thumela, ukuKhangela, kunye namaXwebhu okuThengisa eSign